RASMI: Kooxda Barcelona oo shaacisay lambarka uu Philippe Coutinho u xiran doono kaddib markii lambarkiisii 7-aad uu la wareegay Griezmann – Gool FM
(Barcelona) 25 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa shaacisay lambarka uu u xiran doono xiddigeeda reer Brail ee Philippe Coutinho.
Kooxda Gobolka Catalonia ka dhisan waxa ay xaqiijisay in Philippe Coutinho uu xiran doono xilli ciyaareedkan maaliyadda lambarka 14-aad kaddib markii uu ka soo laabtay heshiiskii amaahda ahaa ee uu ku jiray kooxda Bayern Munich.
Inkastoo uusan weli xirmin suuqa kala iibsiga xiddigaha kaasoo ku eg 5 bisha October ayaan weli si fiican loo kala garanayn lambarrada ay ciyaartoyda kooxda Barcelona xiran doonaan kuwaasoo u dhexeeya 1 illaa 25.
Lambarrada bannaan waxaa ka mid ah lambarka 9-aad oo uu ka tagay Luis Suarez, kaasoo todobaadkan ku biiray kooxda Atletico Madrid.
Xiddiga xulka qaranka Brazil ee Coutinho ayaa xirnaa maaliyaddan lambarka 14-aad qeybtii hore ee xilli ciyaareedkiisii ugu horreysay ee garoonka Camp Nou ka hor inta uusan u guurin lambarka 7-aad.
Laakiin lambarkaas 7-aad intii uu ku maqnaa amaahdii kooxda Bayern Munich waxaa kala wareegay Coutinho weeraryahanka Faransiiska ee Antoine Griezmann.